I-Nintendo switchch Lite: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | Iindaba zeGajethi
I-Nintendo switchch Lite: Olona hlobo lincinci nolunexabiso eliphantsi lekhonsoli
U-Eder Esteban | | Iiconsoles, ngokubanzi
Emva kweenyanga ngamahemuhemu ngayo, iNintendo switchch Lite ekugqibeleni iba semthethweni. INintendo iveza le nguqulo intsha yekhonsoli yayo. Singayithathela ingqalelo njengenguqulelo entsha kunekhonsoli entsha. Sijongene nenye indlela encinci, ngexabiso elifikelelekayo kule meko. Nangona oku kuzisa umda.
Ukusukela ngokutshintshiselana ngokuba neconsole yexabiso eliphantsi, iNintendo Shintsha iLite ncama amandla okuqhagamshela kwiTV nge-dock okanye umsebenzi wokwahlula i-Joy-Con njengoko isenzeka kuhlobo oluqhelekileyo. Ngokwenkampani, le khonsoli iboniswa njengenketho yokudlala izihloko zeNintendo switch kwimowudi ephathekayo.
Kwimeko yoyilo, asifumani lutshintsho lukhuluIcekeceke ngakumbi kunemodeli yoqobo. UNintendo uyazi into esebenze kakuhle nekhonsoli yoqobo kwaye ngoku basishiya nohlobo olutsha olwenzelwe abaphulaphuli abahlukileyo.
1 Uyilo oluhambelanayo
2 Iindlela zemidlalo
3 IKhathalogu yeNintendo switch Lite
4 Ixabiso kunye nokuqaliswa
Njengoko igama layo lisivumela ukuba siqashele, iNintendo Shintsha iLite incinci kancinci kunemodeli yoqobo. Inobukhulu obuyi-91,1 x 208 x 13,9 millimeters kunye ubunzima nabo buba ziigram ezingama-275 kule meko. Ikhaphukhaphu elincinci, kuba eyokuqala inobunzima obumalunga ne-300 yeegram. Ke umahluko omncinci kule meko siyifumanayo.
Isikrini sincinci kule meko. Iphaneli yokuchukumisa ye-intshi ye-5,5 intshi sele isetyenzisiwe. Akukho lutshintsho kwisisombululo, esihlala kwiipikseli eziyi-1.280 × 720 ukusuka kwinto yoqobo. Ukuzimela kugcinwa nakwikhonkco. NgokukaNintendo, iiyure ezintandathu zokuzimela esasinazo kwasekuqaleni ziyagcinwa. Nangona sifumana ukuphuculwa kokusebenza kwiNintendo switchch Lite phakathi kwe-20% kunye ne-30%, ngenxa yokuba i-chip entsha ingenisiwe.
Iindlela zomdlalo zilutshintsho olukhulu kule khonsoli intsha ivela kwinkampani yaseJapan. Njengoko besesitshilo, kule meko sifumana uthotho lwemida kuyo, zinto ezo ezenza ukuba zitshiphu kuneSwitsch yokuqala. Ke yinto ekufuneka siyithathele ingqalelo kulo mba. Izinketho zokudibanisa okanye ukunqamla izixhobo zangaphandle zahlukile ngeli xesha.
Ayihambelani neNintendo Labo
Ulawulo lwakhiwe kwiConsole kwaye alunokwahlulwa
Ayinakusebenzisa imo yedesktop ngaphandle koVuyo lwangaphandle
Ayinakusebenzisa imo yeTV
I-Nintendo switchch Lite ayinayo imveliso yevidiyo
Ayihambelani nesiseko sokutshintsha kuqala
Iindlela zemidlalo zahlukile, nangona unxibelelwano luhlala lungatshintshanga ngokufanayo. Si I-WiFi, iBluetooth kunye noqhagamshelo lweNFC ukuba sasikho kwantlandlolo sasikho kuyo. Ukongeza, izinto ezithengiweyo ngaphambili zinokusetyenziswa kuyo. IJoy-Con okanye ezinye ezinje ngeTshintsho Pro okanye iPoké Ball Plus.
IKhathalogu yeNintendo switch Lite
Omnye wemibuzo emikhulu kubasebenzisi abaninzi yayikukuba i-Nintendo switchch Lite iyahambelana nemidlalo evela kwikhonsoli yoqobo. INintendo iqinisekisa ukuba iyahambelana yonke imidlalo kwikhathalogu enokudlalwa kwimowudi ebanjwa ngesandla. Kananjalo nabo bakwimo yedesktop, ukuba umsebenzisi une-Joy-Con ethengwe ngokwahlukeneyo, kuba bengaphandle. Nangona kweminye imidlalo kunokubakho izithintelo.
Ukongeza, kuye kwaqinisekiswa ukuba zikhona ukuhambelana okungapheliyo ngasemva phakathi kwezixhobo ezimbini, enkosi kwiNintendo Tshintshela kwi-Intanethi. Kwelinye icala, ikhonsoli iyahambelana nayo yonke imidlalo yabadlali abaninzi esiyifumana kuTshintsho lwantlandlolo. Ke kule ngqondo kubonakala ngathi akukho nto inokukhathazeka.
Ukuze uthenge iNintendo switchch Lite, kuya kufuneka silinde kancinci. Iya kuthengiswa ngoSeptemba 20, 2019, Njengoko sele iqinisekisiwe. Ikhonsoli ikhutshwa ngemibala emithathu, engwevu, eluhlaza kunye nephuzi. Sinokuthenga ikhonsoli kunye nekhithi enesiciko kunye nesikhuselo sesikrini. Okwangoku akukho nto sele ikhankanyiwe malunga nezinto ezizodwa, ke asazi ukuba kuya kubakho.
Ixabiso layo lokuthengisa ngama- $ 199 eMelika. Okwangoku, ixabiso elisemthethweni alityhilwanga eSpain ngalo, nangona sijonga ixabiso leNintendo switch ($ 299 - 319 euros), kusenokwenzeka ukuba le khonsoli intsha izakwaziswa eSpain ngexabiso elikufutshane I-euro ezingama-200. Kodwa kuba uNintendo khange anike amaxabiso ngalo mzuzu.
Ukongeza kwinguqu eqhelekileyo, kuqinisekisiwe oko Kuyakubakho iinguqulelo ezimbini ezikhethekileyo zeNintendo switch Lite. Ezi ziinguqu ezimbini uZacian kunye neZamazenta. Zombini ziza namaqhosha kwi-cyan kunye ne-magenta ngokwahlukeneyo kunye neenkcukacha zePokémon Sword kunye nePokémon Shield. Iya kuba lushicilelo olulinganiselweyo oluza kuqala ukuthengiswa ngoNovemba 8.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Iiconsoles » I-Nintendo switchch Lite: Olona hlobo lincinci nolunexabiso eliphantsi lekhonsoli
Kuphi ukufunda iincwadi kwi-intanethi